Dhaliye.com – Luis Suarez Kursiga Badelka Ayuu Galayaa ! Sababtu Maxay Tahay Dhaliye.com
Luis Suarez Kursiga Badelka Ayuu Galayaa ! Sababtu Maxay Tahay
Dhaliye January 5, 2013
Waxaa Akhrisatay :1649Tababaraha Liverpool ayaa xaqiijiyay ahmiyada ay leedahay in uu lahaado kala doorasho dhanka weerar yahanada xiliyada soo socda , ka dib markii kooxda uu ku soo biiray Daniel Sturridge taasi oo ku soo aadeysa xiili laacibka reer Italy Fabio Borini isna dhaawaca uu ka soo kacay taasi oo fursad siineysa in uu nasto Luis Suirez kaasi oo aan si aan kala joogsi laheyn u safanayay tan iyo bilaawga xilli ciyaareedkaan.
Laacibkaasi 27-sano jirka ayaa dhaliyay 18- gool dhamaan tartamada ay Livepool ay ku jirto , mana uusan helin wax nasasho ah tan iyo bilaawga xili ciyaareedkaan , waxa uuna tababaraha ka baqayaa in laacibka daal dareemo xiliyada ciyaaraha kulul jiraan.
” laacibka waan dareemaya in uu rabo ka qeyb gal balse kulamada dambe ka baqayaa in uusan sidiisa sii ahaan oo uu daal dareemo , marka waxa uu u baahan nasiino , waana arin weyn in aan haysano daniel sturridge iyo Fabio Borini ” ayuu sii raaciyay.
POSTED IN » Premier League, Wararka Maanta
January 5, 2013 at 8:00 pm - Reply
January 6, 2013 at 7:23 am - Reply
War maxow ben shegay miyow kamarma ninkaa
January 6, 2013 at 1:27 pm - Reply
K.k.k.k.k war suares marna kama marintid wa laciib borni muxu qawanaya wa heewen iyo malin
January 6, 2013 at 1:57 pm - Reply
kkkk waaba ninka kaliya ee lagu kalsoonyahay borini wax jira maahan sturidge isagana sidii lagu yaqaanay waagiigii hore maahan.. viva liverpool..